Baadari Museveni: “Afrika waa in aan argagixisada ka saarnaa oo aan u celinaa meeshii ay ka yimaadeen oo ah Aasiya iyo Bariga dhexe”. | Halganka Online
Baadari Museveni: “Afrika waa in aan argagixisada ka saarnaa oo aan u celinaa meeshii ay ka yimaadeen oo ah Aasiya iyo Bariga dhexe”.
Asaga oo hadal ka jeedinayey kulan maanta uga Furmay magaalada Kampala Xarunta dalka Uganda Hogaamiyeyaasha dalalka Afrika ayuu Baadariga ka taliya dalka Uganda Yuweri Museveni waxa uu ka codsaday hogaamiyeyaasha Afrika in qaarada afrika laga saaro argagaxisada loona celiyo sida uu sheegay meelihii ay ka yimaadeen oo kala ah Aasiya iyo bariga dhexe.
Wixii ka dambeeyey qaraxyadii gilgilay Kampala Baadari Museveni waxa uu si cad banaanka u soo dhigay nacaybkii uu u qabay Diinta Islaamka iyo Shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah.
Baadarigani wuu ogyahay in Buuralayda ku xeeran magaalada Makkah ee barakaysan ee ku taala Bariga dhexe ay ahayd goobtii ugu horaysay ee ay ku soo degeen aayadihii ugu horeeyey ee Qur’aanka Kariimka ah, Sidaas daraadeen asaga oo arinkaas xasuusan dhanka kalena xasuusinaya madaxda kale ee ayaguna cadowga u ah Diinta Islaamka iyo Shucuubta Muslimiinta ah ayuu waxa uu ku baraarujiyey in lagawada shaqeeyo in Muslimiinta lagu celiyo goobtii uu Islaamku ka curtay oo ah Bariga Dhexe.
Baadari Musevine ayaan qarsan nacaybka uu u qabo Muslimiinta Muqdisho ku nool waxana uu gaaladii kale ee shirkaas kala qaybgashay ka codsay in ay ciidamo dheeraad ah oo uu reer Muqdisho ku xasuuqo la garab Istaagaan.
Shirkan oo soo gaba gaboobi doona maalinta Talaadada ah ayaa Ajandaha ugu weyn ee looga hadlayo waxa uu yahay sidii looga hortagi lahaa in Shacabka Soomaaliyeed ay qaataan ku dhaqanka Shareecada Islaamka iyo dhanka kale sidii Soomaaliya loogu soo diri lahaa Ciidama dheeraad ah oo Saliibiyiin ah oo wadanka Soomaaliya Xasuuq dheeraad ah ka geysta.
Hadalka ka soo yeeray Baadari Musevine ayaa haddii ay ka aqbaal hogaamiyeyaasha dalalka afrika oo ayaga naftigoodu aanan waxba dhaamin asaga waxa ay bilow u noqon doontaa barakicin iyo ku xadgudub Muslimiin badan oo ku nool dalalka Afrika ayada oo dhanka kalena ay Muslimiin badani ay markaas ka dib si wanaagsan ugu baraarugi doonaan nacayb gaaladu u qabto Diinta Islaamka iyo Shucubta Muslimiinta ah.
Qaraxyadii Kampala ka dib ayuu madaxweynaha Maraykanku Brack Obama asaga oo kicinaya wadamada Afrikaanka ah waxa uu Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ku tilmaamay in ay yihiin “Cunsuriyiin” aan dan ka lahayn dhiiga Shucuubta Afrikaanka taas oo ay xeel dheerayaal badani ku micneeyeen in uu ku kicinayey Shucuubta Afrikaanka ah si ay garab ugu siiyaan dagaalka uu ku jabay ee uu kula Jiro Mujaahidiinta Caalamka meel kastaba ha joogaane.
Lama garanayo in hogaamiyayaasha dalalka Afrika ay aqbali doonaan codsigan ka yimid Baadari Musaveni ayada oo la wada ogyahay in inta badan dalalka afrikaanka ahi ay la dhaqaaqi la’yihiin Gaajo,Cuduro,Dagaalo sokeeye iyo sidoo kale Deymo ay ku leeyihiin wadamada reer galbeedka ah oo deymo badan oo Ribo ah dusha kaga cusleeyey wadamadan afrikanka ah.
« Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku sugan goobihii ay dhawaan kala wareegeen Maleeshiyaadka Riddada. Boosaaso Cabsi Soo Food Saartay Dadka Shaqaalaha U Ah Puntland Iyo Askar Lagu Dilay Boosaaso »